Taona nisian'ny orinasa madinidinika ara-tsosialy | Martech Zone
Isaky ny reko fa misy manomboka orinasa na manana orinasany kely, dia manaja azy avy hatrany aho. Orinasa madinidinika no mandrafitra ny ankamaroan'ny tambajotranay maharitra ary miasa mafy isika rehetra mba hifampitaiza ao amin'ny ranomasina goliaths. Matetika miantehitra amin'ny orinasa madinidinika kokoa aho satria mpanjifa lehibe ny mpanjifa rehetra… tsy fampanantenana fotsiny izany fa zava-misy. Ireo orinasa madinidinika dia mitodika any amin'ny tambajotra sosialy bebe kokoa hatrany hiankina amin'ny tambajotran'izy ireo, mahita mpanjifa vaovao, hianatra momba ny indostrian'izy ireo, manam-pahefana manangana. LinkedIn dia ivon'ny fidirana an-tsehatra.
Mety ho gaga ianao amin'izay hitan'ny LinkedIn: 94% amin'ireo mpamaly amin'ny fanadihadiana izay mampiasa media sosialy no nilaza fa mampiasa azy io amin'ny marketing, ary 3 amin'ny 5 no milaza fa mamaha ny olana ara-tsosialy amin'ny fanamby lehibe hisarihana mpanjifa vaovao. Ho an'ireo orinasa mitombo be dia be kokoa ny haino aman-jery sosialy. Manam-bola amin'ny haino aman-jery sosialy mihoatra ny fantsona hafa izy ireo, ary manaiky fa tena mandaitra amin'ny fanatanterahana tanjona ara-barotra toy ny marika, marketing amin'ny atiny, ary ny taranaka mitarika.
Visit Microsite vaovao vaovao an'ny LinkedIn hianaranao bebe kokoa momba ny fomba ahafahan'ny LinkedIn manampy anao hahatratra ny tanjonao manokana amin'ny alàlan'ny media sosialy.
Tags: LinkedInbiz kelyfandraharahana madinikasmb
Mar 10, 2014 amin'ny 8: 02 AM
Lahatsoratra tena manome fampianarana sy mahafinaritra tokoa. Nanampy fampahalalana marobe tao amin'ny bilaoginao ianao. Misaotra ny
mizara ity fampahalalana sarobidy ity.